The essence of being भनेको के हो ? – BRTNepal
डा. दुर्गा दाहाल, “अनुभव” २०७७ जेठ ४ गते १५:०४ मा प्रकाशित
“ Happiness is not by chance; but by choice.”
हाम्रा जीवनमा कतिपय यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् जसको उत्तर सरल भएता पनि त्यसलाई वास्तविक अर्थमा अनूदित गर्न कठिन हुन्छ ।
मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन तर त्यसको पुष्टि गर्न हरेक व्यक्तिले सक्तैन । कतिपय मानिसहरू त्यो सर्वश्रेष्ठताबाट च्युत हुन्छन् । उसको वंशाणुगत अवगुण, अशिक्षा र कु- संस्कारबाट अनि वातावरणीय प्रभावबाट त्यो मानिसमा राक्षसीय प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएर ऊ असामाजिक बन्छ ।
हामी मानिस सामाजिक प्राणी भएका नाताले हामीमा सामाजिक गुणहरू विद्यमान हुनु ज़रूरी छ । सामाजिक एकता, सद्भाव, सहनशीलता, सदाचार , अनुशासन, अनुशीलन, वैचारिक स्वच्छता, मित्रता आदि कायर गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यी सबै गुणहरू आयत्त गर्नलाई सर्वप्रथम मानिसले आफूमा खुसीको खेती गर्नु पर्‍यो । ख़ुशी आफूले आफैमा निसृत गर्ने कार्य हो । यो अन्य कसैबाट र द्रव्यबाट प्राप्त गर्न सकिने तत्त्व हैन । म क्षणिक खुसीको कुरा गरिरहेको छैन परन्तु वास्तविक र चिरस्थायी खुसी जसले तपाईँलाई जीवन अर्थपूर्ण ढङ्गले बाँच्ने प्रेरणा दिन्छ ।
The essence of being भनेको पनि यही नै हो । तपाईँ आफू भएर बाँच्नुको अर्थ बुझ्नु हो । त्यो सत्यलाई उद्घाटन गर्नु हो । र, त्यसरी नै सद्गुणहरूको खेती गर्दै आफूमा रमाउनु हो । जीवन कति आनन्दमय छ । स्वर्गीय र पारमार्थिक छ ।
यो तन, मन, मुटु र आत्मालाई नियन्त्रणमा राखी अनवरत जीवनको सत्यलाई खोजी गर्नु हो । असल मानवीय गुणहरूलाई जीवनमा समावेश गरी सर्व हिताय; सर्व सुखायको सिद्धान्तमा बाँच्नु हो । कसैप्रति अधर्म नगर्नु हो ।
The essence of being is one’s inborn qualities, characteristics and substance of thoughts and actions.
In other words, essence is defined as the core nature or most important qualities ofaperson or thing.
यो संसारमा दुई थरीका मानिसहरू छन् । पहिलो थरीकारहरू मानिसहरू मानव सेवामा समर्पित छन् । सदैव अर्काको हित र कल्याणको बारेमा कार्यहरू गर्दछन् । उनीहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदिबाट प्रभावित वा नियन्त्रित छैनन् ।
अर्काथरिका मानिसहरू दानवीय प्रवृत्तिका छन् र पर पिडामा रमाउँछन् । उनीहरूले सामाजिक र मानवीय हितका लागि केही सोच्न अथवा गर्न सक्तैनन । जीवनको सारतत्वलाई बुझेका छैनन् र बुझ्न पनि चाहँदैनन् । केवल आफ्नो सुख- सुविधा र सयलका निम्ति उद्यत हुन्छन् ।
तर जीवन बुझ्ने हरूका लागि हरेक दिन एउटा नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हो । जीवन यो संसार जस्तै हो । कहिले दिन ; कहिले रात अनि फेरि दिन । कहिले घाम; कहिले छाया तर जीवनलाई हामीले सजिलो बनाउन सक्नु पर्छ । तपाईँको जीवन तपाईँले नै चलाउनु पर्छ र मेरो जीवन मैले । कुरा काट्ने मानिसहरू धेरै भेटिन्छन् तर सही सल्लाह दिने मानिसहरू विरलै पाइन्छन् । अतः जीवनका हरेक मोडहरूमा तपाईँको विवेकपूर्ण निर्णयले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ र जीवनको उँचाइमा पुर्‍याउन सक्छ ।
“Everyday isanew beginning of life ; takeadeep breath ; smile and start again.”
हरेकका जीवनमा अँध्यारा पाटाहरू छन् । संसारका सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्वहरू ठुलो गरिबी, सङ्कट र विघ्न-वाधाबाट आजको यो सफलताको उच्च शिखरमा पुगेका छन् किनभने उनीहरू कहिल्यै हारेनन् र अनवरत लागि रहे । किनभने जीवनमा हार्नु हुँदैन । निरन्तर आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि लड़ि रहने व्यक्तिले अन्ततोगत्वा सफलता हासिल गर्छ ।
तर स्मरण रहोस्, आफू को हुँ, यो संसारमा मेरो जन्म किन भएको हो र अब मैले के गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्नहरूको सही उत्तर जान्नु ज़रूरी छ । त्यसपछि आफूमा अन्तर्निहित सद गुणहरूको खोजी गरी तदनुरूप हिंडनु र आफूमा आफैलाई पाउनु र रमाउनु चैँ ‘ The essence of being’ हो ।
यस्तो व्यक्तिले कुनै समाज, समुदाय, सङ्घ- संस्था, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेतृत्व गर्न सक्छ ।
“ A sign ofagood leader is not how many followers s/he has but how many leaders s/ he creates.”
तर विडम्बना हाम्रो देशका नेताहरूले भोलिको नेपाल हाँक्ने नेताहरू जन्माएनन्; बरु शक्ति, सत्ता र द्रव्य लोभमै रमाई रहे ।